SAWIRRO” Faah Faahino Dheeraad Ah Oo Laga Helayo Qarax Goordhow Ka Dhacay Muqdisho | Baahin Media
SAWIRRO” Faah Faahino Dheeraad Ah Oo Laga Helayo Qarax Goordhow Ka Dhacay Muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax xooggan oo daqiiqado ka hor ka dhacay Isgoyska mashquulka badan ee Maka Al-Mukarama, qeybta xigta degmada aaberi, kaasoo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.
Sida wararku sheegayaan qaraxa waxa uu ahaa mid laga soo buuxiyay gaari, kaasoo la dhigay afaafka hore ee shirkada Isgaarsiinta Hormuud, iyadoo qaraxa uu sameeyay maqaaxida Barwaaqo, kabaro haweenka qaad ku iibin jireen oo laamiga dhiniciisa kale ah iyo goobo kale oo Ganacsi.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in goobta laga qaaday dad gaaraya 15 ruux oo dhaawacyo kala duwan qabo oo u badan dad wadada marayay iyo haween qaad iibinayay, iyadoo aan la sheegin tirada rasmiga ah ee dhimashada.
Qaraxa ayaa burbur xooggan gaarsiiyay dhismooyinkii halkaasi ku yiilay, iyadoo laamiga ay ku soo daateen dhagxaan iyo laamaha geedo ku yaala wadada dhineceeda oo xajmiga qaraxa gooyay.
Gawaarida gurmadka deg dega ee Aamin Ambullance oo durba tagay halka qaraxa uu ka dhacay ayaa goobta ka qaaday dadka wax ku noqday, kuwaasoo ula cararay xarumaha Caafimaadka.
Dowladda waxa ay hore u sheegtay in Aamin Ambullance shaqada ka joojisay, balse waxaa jira warar sheegayo in hay’adan gurmadka deg dega ah laga maarmi waayay, sidaasna looga dalbaday iney dadka u gargaaraan.
Ciidamada amaanka ayaa tagay halka uu qaraxa ka dhacay, iyagoo xirtay wadada isku xirta Isgoyska dabka ilaa hoteelka Maka Al-Mukarama, waxeyna Shacabka iyo Warbaahintaba u diidayeen iney goobta u dhawaadaan.
Si kastaba, gaariga qarxay ayaa ku sii jeeday dhinaca Madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo aan la ogeyn sida uu ku soo gaaray Isgoyska Debka oo ku dhow Saldhigga booliska Waaberi, maadaama dowladda ay xiratay inta badan wadooyinka Muqdisho.